SAWIRRO: Banaan baxyo looga soo horjeedo Masaajidyo lagubay oo ka dhacay Magaalada Jigjiga ee Somali galbeed – Kismaayo24 News Agency
SAWIRRO: Banaan baxyo looga soo horjeedo Masaajidyo lagubay oo ka dhacay Magaalada Jigjiga ee Somali galbeed
by admin 24th December 2019 0187
Waxaa maanta magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ka dhacay banaan bax balaaran oo looga soo horjeeday sadex masaajid oo dhawaan lagu gubay magaalo katirsan ismaamulka Amxaarada Itoobiya.
Dadka banaan baxa dhigayay oo u badnaa dhalinyaro ayaa si weyn uga careesnaa falka lagu gubay masaajida ku taalay magaalada Motta ee ismaamulka Amxaarada , waxa ayna dibad baxayaasha ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah amxaaradii falkaasi geesatay.
Banaan baxayaasha ayaa watay boorar ay ku qornaayeen ereyo ay ku muujinayaan in dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan ay mid yihiin, waxa ayna ku dhawaaqayeen sidii ay diyaar ugu yihiin difaacida diinta Islaamka.
Magaalooyin kale oo katirsan dalka Itoobiya ayaa sidoo kale waxaa ka dhacay banaan baxyo looga soo horjeeday falkii lagu gubay masaajida kuyaala ismaamulka Amxaarada dalka Itoobiya.
Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya ayaa horey u cambaareeyay falkii lagu gubay masaajida ku yaalay magaalada Motta, waxa uuna Abiy uga digay Shacabka Itoobiya in ay ka fogaadaan waxyaabaha keeni kara isku dhac ku saleesan dhanka diimaha.
Siyaasi Cabdiraxmaan C/shakuur oo ka shifay olole cusub oo ay bilowday Villa Soomaaliya.
Daawo: Maamulka Gobolka Banaadir oo Lacago u qeybiyay Dadkii ku dhaawacmay Qaraxyadii Xalay
Kismaayo oo lagu Dhaawacay mid kamid ah Nabadoonada kasoo horjeeda Axmed Madoobe
War hada: Alshababa ayaa war ka soo saartay sargaal sare oo NISA ka tirsan oo saakay lagu dilay muqdisho